Mbọn na akara ngosi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị | Martech Zone
Mbọn na akara ngosi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị
Fraịde, Jenụwarị 15, 2010 Thursday, July 2, 2015 Douglas Karr
Anaghị m akwado echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị. O doro anya na nke a bụ vidiyo nke otu nzukọ na-achọghị mgbanwe na, ekwenyere m, na-ekwubiga okwu ókè banyere akara ngosi na ebumnuche nke ịre ahịa na mbupụ nke Onye isi ala Obama. Enwere ụfọdụ ntụnyere pụrụ iche nke Bush na Obama na Republican na Democrats nke bara uru ikwu maka blọgụ ahịa, ọ bụ ezie.
Pịa site na vidiyo na Ihe ngosi na President Obama:
M ga-enwe ekele maka ya ma ọ bụrụ na ị naghị ere ọkụ m maka itinye nke a (dị ka ọtụtụ mere mgbe m mere ya Ọchịchị Obama post). Ndọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-esiri ike ikwu maka mana iji ụdị aha, akara ngosi na azụmaahịa site na mkpọsa Obama na Onye isi ala Obama White House bụ na ọ dịghị ihe dị mkpụmkpụ.
Otu ajụjụ bụ ma nke a ọ bụ ezigbo akara iji gaa n'ihu ịkwanye n'okpuru Onye isi ala nke Barack Obama? Onwe m, echere m na ọ bụ ụzọ dị nchebe maka Democratic National Party. Ebe ọ bụ na akara Obama siri ike karịa akara DNC, enwere ike ịkekọrịta ịga nke ọma ọ bụla mana ọdịda ọ bụla nwere ike ịlaghachi na akara nke aka gị. Ọ ga-amasị m inwe echiche gị!
Tags: barack obamandi ochichi onye ochichidesignihe oyiyiAkara ngosiObamaakara ngosi ndọrọ ndọrọ ọchịchịndọrọ ndọrọ ọchịchị
Na-eweta nchịkọta Enterprise na WordPress
Ihe Ntanetị Blog Na-amasị na Ihe Na-adịghị amasị Ya